मलेसियमा पनि कोरियामा मोडेलमा कामदार पठाउने तयारी – Everest Dainik – News from Nepal
मलेसियमा पनि कोरियामा मोडेलमा कामदार पठाउने तयारी
काठमाडौं, साउन १५ । नेपाली कामदारलाई अहिले मलेसिया जान रोक लगाइएको छ । यो नेपाल सरकारले रोकेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जादाँ नेपालीहरूले धेरै शुल्क तिर्नुपरेका भन्दै सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगाएको हो ।
शुरुमा विरोध गरिएपनि यस विषयमा अहिले व्यापक छलफल गरिएको छ । र छलफलले नयाँ उचाइ लिएको छ । नेपालले वैदेशिक रोजगार सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । जसले विदेशिने कामदारलाई ठगिनबाट जोगाउन र आर्थिक भारलाई ‘शून्य’ मा झार्न सरकारलाई नयाँ सुझाव दिएको छ ।
आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कामदारलाई आर्थिक भार पनि नथोपरिने र नठगिने वातावरण तयार गर्न केही महत्त्वपूर्ण सुझाव समेटिएका बताइएको छ ।
यसको दबाब मलेसिया सरकारसम्म पनि पुगेको छ। नेपाली कामदार जान रोकिएसँगै त्यहाँ सुरक्षा गार्डको अभाव भइरहेको भन्ने समाचार आइरहेका छन्। जसको कारण मलेसिया सरकार पनि यो विषयलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्गो लगाउन चासो व्यक्त गरेको छ ।
साथै उसले नेपाली कामदारका समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै त्यहाँ मानव संसाधन मन्त्रीले नेपालका यसअघिको कामदार नपठाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । र समस्या समाधानका लागि सरकारी तबरबाट काम गर्न सकिने बताएको छ ।
अब समाधान के हुन्छ त ?
कसरी मिलाउन सकिएला यो विषय। दुईवटा विकल्प छन्। एउटा फ्री भिसा फ्री टिकट प्रक्रियालाई हटाएर ‘इम्प्लोयर्स पे मोडल’ को प्रयोगलार्इ प्रभावकारी गर्ने अर्को कोरियामा नेपाली कामदार पठाए जस्तै जिटुजी व्यवस्थामार्फत सरकारी तबरबाटै कामदार पठाउने। दुवैको उद्देश्य एउटै हो, नेपाली कामदारको सुरक्षा र काम अनुसारको प्रभावकारी तलब सुविधा।
इम्प्लोयर्स पे मोडल किन ?
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ‘फ्री भिसा र टिकट’ को मोडलका कारण बढिरहेको कामदार ठगिने क्रम रोक्न यो व्यवस्थामा नेपाली कामदार लैजाने मुलुकका रोजगारदाताले लाग्ने सबै खर्च आफैँले पठाउनुपर्छ । त्यसैले ‘कामदारले पैसा तिर्नु पर्दैन ।
बिचमा कुनै दोस्रो निकायले खेल्न र ठग्न सक्दैन।
श्रीलंकामा यो मोडल सफल छ।
जी टु जी भएमा के फाइदा ?
कोरियामा नेपाली गएको जस्तै सरकारी तबरबाट कामदार पठाउने व्यवस्था भएकाले यो अरू व्यवस्थाभन्दा धेरै सुरक्षित छ।
विदेशमा पाउने तलब र सुविधा त्यहाँको सरकारले तोकेको बमोजिम नै हुन्छ।
नेपालीहरूले अहिले पाइरहेको तलब भन्दा धेरै तलब हुन सक्छ।